DEG DEG+DAAWO: Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Tukaraq,Khasaaraha oo sii kordhaya & Xaaladda caawa
June 12, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 9
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal dagaal ka dhacay deegaanka Tukaraq kaasi oo dhexmaray Ciidanka Maamulka Somaliland iyo Ciidamada dib u xoraynta Khaatumo ee uu hoggaamiyo Col. Faysal Falaalug.
Xaaladda deegaanka Tukaraq ee caawa ayaa degan waxaa mararka qaar la maqlayaa rasaas labada dhinac isweydaarsanayaan,sida ay dadka deegaanka inoo sheegeen.
Inta la ogyahay saddex qof ayaa ku dhimatay dagaalka oo ka kala tirsan dhinacyadii dagaalamay,waxaana warar qaar ay sheegayaan in jab xooggan la gaarsiiyay ciidanka Somaliland.
Dagaalka ayaa saqdii dhexe ee xalay bilowday kadib markii dagaal-yahanno ka tirsan Ciidamada khaatumo ay weerar culus ku qaadeen taliska Maamulka Labaxay Soomaliland ee aga’gaarka buurta “Laba-madaxleey” oo dhanka koonfur bari ka xigta tuulada Tukaraq.
Deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa ku dagaalamaya Maamulada Puntland iyo Somaliland iyo Jabhado ka soo horjeeda Maamulka Somaliland.
Isaaqow qabiilbaa tahay qabiil inuu qabiil kale ee soomaaliyeed gumeysto baad u jeedaa waxaa haboon inaad miyirsatoooku noqoto gurigaagii hadaadan dooneyneyn in Hargeysa laguugu yimaado
Xaalada waad aragtaa meel walba waalagaa reerkaaga keliyah maareyso HARTI WAA KAA TAGAY
Marka hore salaan sare, Marka xigga qofku haddu xajka ama cimradda tago marku soo noqdo dadka kuma bilaabo xan iyo ceebeyn. Bogga hore waxaad soo sheegtay in aad cimro tagtay oo aadan maka iyo madiina aadan ku soo arkin Dab La Riday.
Sxb horta Anigu waxaan ku oran lahaa haddaad cimro tagtay oo ilaahay dembigaagi kuu dhaafay Xanta badana haddaba JOOJI.
Sxb kheyr baan kuu rajeeyey ilaahayna ha kuu aqbalo Cimro iyo xaj iyo Ducoba.
Xanta aad ixamatayna waan kaa saamaxay !
Wlc Back…………… Kolay haddaad waxaagi xuma walaaqanaysaaye kkkkkkkkkk.
Suldaan salaantii barakada iyo karaamada huwanayd baan hawada sare ku soo mariyay, aniga oo idiin wada rajeynaya bash bash iyo barwaaqo.
@Al Xaaji Atoore,
War xaajigoow salaan sare baan adiga na hawada kuu soo marinayaa oo waxaan kuu raaciyay hambalyo iyo boogaadin in aad soo cimryasatay.
Maanta adiga ayaa iga fadli badan oo ducadayda ka sarreeya laakiin waxaan Eebbe kaaga rajeynayaa aqbalaad iyo kheyrkeeda oo dhan oo uu ku waafajiyo.
Haddii aynu “xaaji” kuugu yeedhi lahayn magacaasi odaygii iidoor baa jaa kaa sii bahdilay oo garan maayo runtii.
Jeegaanta”?/Hargeysa:Kooxaha H/Awal iyagaa mucaarad isugu filan!
1) INUU ISAAQ NAGU XUKUMO HA U DURBAAN TUMINE, WAXAAD DAMACDAY WAA FAASHIL AAN DIB USHAQAYNAYNE NIN WALIBA HALKUU DEGI JIRAA DANI KU SAYTEYNE, (- NIN LAGU SEEXDOOW HA SEEXAN; Hub Baad sidaa ha seexan
@ Suldaan Prof Taajka Maakhir
Suldaan salaan sharafti saldanadda maakhir Coast ayaan hawada Southampton kusoo marinaya oo aan labadan maalmood ku sugna.
Suldaan aad baan ugu qoslay sheekaddi magaca Xaajiga waxaa dhulku ku jiiday odaygi iidoor marka Atoore waa in aynu wax kale uga baadhbaadhna Suugaanta qotadda dheer ee Maakhir Coast.
Atoore sida marku usoo galay Marqaan media anigu igu bilaabay sidaas buu kusoo cimraystay ilaahay umalayn maayo in uu ka aqbalayo nin Xan badan.
@ Islaan Mingis Tume …….Islaanka Eyl & Garoowe.
Boowe salaan sharaf ayaan hawadda kuusoo marinaya aad baan u fiicanahay waxaan ilaahay ka baryaya in aad caafimaad iyo cimri dheer ku siiyo.
Isaaq waa beel Somali ah sida Beesha dhegta gaarisa! Burco hargeyso iyo Berbera dagaalka dhexdooda ah marabaan waxey doorbideen iney Sonali kale Ku duucaan.
Isaaqoow hubka dhiga hubka dhiga!!!
To/Suldaanka”SHARAFTA/iga-mudan /suldaanada Geeska/africa/Asia?
@Suldaan/aqoon-yahan/Dab La Riday?…asalaamu/Caleykum/waraxmatulaahi
Wabarakaat/salaan Goobeed boowe iska waran/seetahay/mahadsanid/.
(THANK U, NEXT).